ကမ္ဗောဒီးယားဖောက်သည်များ၏စမတ်သော့ချက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အမိန့်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ၌ပြင်းထန်သောကပ်ရောဂါအခြေအနေနှင့်အတူ။ BRUCE, LANDWELL ၏တာဝန်ရှိနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ JIN BE အတွက်ရောင်းပြီးနောက်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကမ္ဘောဒီးယားသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
တရုတ်၏အသိဉာဏ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပိုမိုအောင်မြင်မှုများ! ရာပေါင်းများစွာသောစမတ်သော့ခတ်ပုံးများသည်တူရကီသို့ ဦး တည်နေသည်
post အချိန်: ဒီဇင်ဘာ -10-2020
ယခုနှစ်အစတွင်သရဖူအဆုတ်အအေးမိရောဂါရုတ်တရက်ကူးစက်မှုသစ်သည်ကုမ္ပဏီအများအပြားသည်လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုနှေးကွေးစေသည့်အတွက်လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်စတင်ရန်ခက်ခဲပြီးနှေးကွေးခဲ့သည်။ LANDWELL အတွက်မည်မျှပင်ခက်ခဲပါစေသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အားစိုက်ထုတ်ရမည်။ဆက်ဖတ်ရန် »
ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအနီရောင်စက်ဝိုင်းဖြင့်မှတ်သားထားသောနေရာကို ကျေးဇူးပြု၍ ဂရုပြုပါ။ ဒီမီးခိုးရောင်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကိုအရင်ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်။ ထို့နောက်ဝက်အူများကိုပြန်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချိန်တွင်သော့ကို အသုံးပြု၍ သော့ခတ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောဒီဇိုင်းရေးဆွဲ? ပထမ ဦး စွာ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အကြီးစား Key ကိုသိုလှောင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့, အသေးစား Box ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်သော့, သော့ခတ် Key ကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့, Control key အတွက်လေးထောင့်ကွက်, ဆွဲချ Key Box, အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးအဖွဲ့,
Beijing Landwell အီလက်ထရွန်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 13522529319
ဖုန်းနံပါတ်: 0086- (0) 10-84717640